Real Madrid Oo Xasuuqday Kooxda Cruz Azul, Iskana Xaadirisay Finalka Koobka Kooxaha Aduunka | Radio Baidoa
Guriga Sports Real Madrid Oo Xasuuqday Kooxda Cruz Azul, Iskana Xaadirisay Finalka Koobka Kooxaha...
Real Madrid Oo Xasuuqday Kooxda Cruz Azul, Iskana Xaadirisay Finalka Koobka Kooxaha Aduunka
Kooxda Real Madrid ayaa ciyaartii ka dhacday Garoonka Stade de Marrakec ee magaalada Marrakech ee wadanka Morocco ee ka tirsanayd koobka kooxaha aduunka ku dardartay kooxda ree Mexico ee Cruz Azul. Madrid ayaa guushan ku gaadhay goolal ay kala dhaliyeen Ramos, Benzema, Bale iyo Isco.
Real Madrid ayaa isku diyaarinaysay inay guulheedii xidhiidhka ahaa halkeeda ka sii wado isla markaana ay ku sii dhawaato hanashada koobka kooxaha aduunka ee ka socda wadanka Morocco halkaas oo ay kulmeen kooxda ree Mexico ee Cruz Azul.
Kooxda ree Mexico ee Cruz Azul ayaa doonaysa iyaduna inay ka naxsato kooxda Madrid isla markaana ay mariso dariiqii ay hore u soo tustay kooxda Sydney Wanderers taas oo ay kulankii sabtidii 3:1 ku dubatay waqtiga dheeriga ah. Tababare Ancelotti ayaana ciyaarta ku soo galay shaxdiisa ugu adag wuxuuna soo wada qadimay ciyaartoyda kooxdiisa kuwa ugu fiican.
Real Madrid ayaana ciyaarta ku bilaabtay dardar xoogleh, waxayna goolkeeda furitaanka la timid daqiiqadii 15 aad ee bilawgii ciyaartaba waxaana goolkaas u dhaliyay difaaceeda Sergio Ramos, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Madrid hogaanka ciyaarta ugu qabatay.
Real Madrid ayaa markale daqiiqadii 36 aad la timid goolkeeda labaad waxaana markan goolkaas ugu farayaraystay gool dhaliyaheeda karim Benzema oo ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Real Madrid gonaaka ciyaarta ku dheeraysatay.
Daqiiqadii 40 aad ayaa rekoodhe loo dhigay kooxda Cruz Azul waxaana ka qasaaraiyay Gerardo Torrado waxaana rekoodhaas kooxdiisa Madrid ka badbaadiyay Casillas. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 2:0 ay Real Madrid guusha ugu taagan tahay.
Qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Real Madrid halkii ka sii waday maamulidii ciyaarta waxayna goolka saddexaad ee niyada ka dilay kooxda Cruz Azul la timid daqiiqadii 50 aad ee bilawgii qaybtii danbe ee ciyaarta waxaana markan shabaqa soo taabtay xidigeeda Gareth Bale kaas oo Madrid hogaanka ciyaarta uga dhigay 3:0.
intaa wixii kadanbeeyay ayay kooxda Cruz Azul u muuqatay inay kala daadatay isla markaana ay ogaatay inuusan xaalku u shaqaynayn kulankan waxaana daqiiqadii 72 aad goolka afraad u dhaliyay Isco. Cristiano Ronaldo oo goolka Bale caawiye ka ahaa ayaa markale Isco ka caawiyay inuu goolka afraad kooxda Madrid u dhaliy, ciyaarta ayaana noqotay 4:0 ay Real Madrid ku dhibaataynayso kooxda Cruz Azul.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4:0 ay Real Madrid ku xaaqaday kooxda Cruz Azul oo ay wada ciyaareen kulanka Semi finalka koobka kooxaha duunka. Real Madrid ayaana iska xaadirisay finalka koobka kooxaha aduunka halka ay ka gaadhay guusheedii 21 aad oo xidhiidh ah.